Bashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula - Ilanga News
Home Izindaba Bashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula
Bashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula
Kwethulwe igatsha elisha lale nhlangano eThekwini
AMALUNGU e-Operation Dudula ekhombisana nephoyisa lapho bekuqhamuka khona amatshe obekujikijelwa ngawo abebemasha izolo eThekwini
BHEKI NDLOVANA BAJIKIJELWE ngamatshe kwelinye lamabhilidi asePhoyinti, eThekwini abe-Operation Dudula, ngesikhathi bemasha izolo ngeSonto, njengoba bebethula igatsha laseThekwini. Amatshe abeqhamuka phezulu ebhilidini elihlala izitshudeni iSeaboard, nokho lokho akuzange kuqubule dlame, futhi imashi iqhubekile yaze yaphothulwa. Izitolo ezingi zabokufika ezise-mgwaqweni uDr Pixley kaSeme (West Street), bezivaliwe ngesikhathi kuqhubeka le mashi, kanti bekubonakala ukuthi abanye banovalo, bemi izixongololo bebukela. Ezokuphepha beziqinile, amaphoyisa eSouth African Police Service (SAPS), nakamasipala we-Theku eqaphe ngeso lokhozi.
Le mashi esukele eCity Hall, iphelele esiteshini samaphoyisa esisePoint, eSouth Beach, lapho i-Operation Dudula yethule khona uhlu lwezikhalo olwemukelwe nguMnu Andrew Dikobo, oyiHead of Immigration eMnyangweni we-zaseKhaya, kanye noBrigadier Sibongile Cynthia Ngubane we-SAPS. UMnu Dan Radebe, oyisekela likasihlalo kazwelonke we-Operation Dudula, uthe bajabule ngokuthi bagcine bephumelele ukwenza le mashi, nokuvula igatsha labo eThekwini. Kuzokhumbuleka ukuthi kwakuhlelwe ukuba le mashi ibe semasontweni ambalwa edlule, kodwa yabuya yahlehliswa. Ekhuluma neLANGA uMnu Radebe uthe: “Sijabule kakhulu ngokuthi ekugcineni sesilethulile igatsha laseThekwini.
“Bekusemqoka kakhulu ukuba sethule igatsha laseThekwini ngo-ba liyidolobha elinechweba elikhulu kwiSouthern African Development Community (SADC), “Yilona chwepha elisetshenziswa ukungenisa izimpahla ezingombombayi ezweni. Futhi yilezo zimpahla ezingombombayi ezinomthelela omkhulu enkingeni yokusweleka kwemisebenzi ezweni. “Imboni yethu yedwangu ifile, ibulawa yizona izimpahla ezingombombayi,” kusho uMnu Radebe. Uthi ukubhekisiswa kwezimpahla ezingena echwebeni laseThekwini kungaba nomthelela ekulweni nenkinga yezimpahla ezingombombayi ezingena ezweni.
Uqhube wathi njengoba sebelethulile igatsha laseThekwini, sebeshiyele ebuholini obusha besifu-ndazwe buka-Operation Dudula, ukuba beqhubeka nezinhlelo zika Operation Dudula. Baphonsele uMnyango wezeMisebenzi inselelo yokuba uhlole zonke lezi zinkampani eziqasha ngokungemthetho abantu bokufika. “Silindele nokuba bafake ingcindezi eMnyangweni wezaseKhaya ukuba uqinisekise ukuthi bonke abokufika abakuleli ngokungemthetho babuyiselwa emazweni abo. “Silindele ukuba balekelele intsha ngokuqhamuka nezinhlelo zokuthuthukisa amakhono ezizoyisiza ukuba ikwazi ukuthola imisebenzi. I-Operation Dudula ayibhekile nje kuphela indaba yabokufika.
“Esikwenzayo sikwenza ngoba sikhathazekile ngentsha eswele imisebenzi eNingizimu Afrika, esicwile ezidakamizweni. Ngakho silindele ukuba basebenzisane na-maphoyisa ukuqinisekisa ukuthi kuqedwa izidakamizwa,” kusho uMnu Radebe. Uthe abayigqiziqakala imibono yalabo abathi i-Operation Dudula inokucwasa abokufika, wathi akalindele ukuba labo abahlomulayo ngesidakamizwa ukuthi bavumelane nabo.Bashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula Kwethulwe igatsha elisha lale nhlangano eThekwini AMALUNGU e-Operation Dudula ekhombisana nephoyisa lapho bekuqhamuka khona amatshe obekujikijelwa ngawo abebemasha izolo eThekwini.
Previous articleBakhala ngemenenja ‘enyamalele’
Next articleIKHALISA OTHISHANHLOKO “EYOKWEHLISWA”